ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊(၂၄.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ကော့ကရိတ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ ကျွန်တော်ဦးမောင်ဝင်းမှ ကျွန်တော်၏သမီးလေး မစန္ဒာဝင်း(ဒုနှစ်၊ ဘားအံတက္ကသိုလ်) ခံစားနေရသောနှလုံးရောဂါနှင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အပေါ်ကုသရာတွင်ကူညီပေးနိုင်ပါရန်စာရေးသားပေးပို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အမေစုမှ စာကို ဖတ်ရှု့ပြီးကရင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုဘိုဝေမောင်အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်လွှဲပေးလိုက်ပါသည်။ ဦးဘိုဘိုဝေမောင်မှလည်း အစမှအဆုံး လိုအပ်သည်များကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ […]
“စွမ်းရည်”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အရမ်းတော်လွန်းတဲ့ မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး
ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ။ ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ… အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့ မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့အတူ လာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင်ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ […]
တဈရှာလုံး ဝမျးနညျးခဲ့ရတဲ့ (ယုံကွညျမှုလှနျကဲခွငျးရဲ့ ပေးဆပျမှု့)
တစ်ရွာလုံး ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ (ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းရဲ့ ပေးဆပ်မှု) အသက်က ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်..လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ဖအေက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ဆုံးသွားခဲ့ပြီး သားမိနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခင်ပွန်းပေါ်နဲ့ တစ်ဦးသော သားလိမ္မာလေးအပေါ်သစ္စာရှိစွာ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲ ရိုးသားကြိုးစားကြတဲ့ သားနဲ့ အမေ /အမေနဲ့သားကမ္ဘာလေး….. သားလေးကို ဖခင်လိုတစ်မျိုး ရင်နင့်သဲချာ သားရတနာလိုတစ်ဖုံ ရင်အုပ်မကွာ […]
B.Tech ၊ B.E ၊ M.E ၊ Ph.D နှင့် နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်များအထိ တက်ရောက်နိုင်မည်ဆိုသည့် အထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ကျရှုံးခဲ့သူများအား အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ၂၀၀၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ရလာဒ်များကို ဩဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ ကထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ရာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အရ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ ကိုးသိန်းကျော်ရှိတဲ့ အနက် သုံးသိန်းကျော်ြေ […]
ကျူရှင်မတက်ပဲ ၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မိုးညှင်းမြို့မှ မမျိုးခိုင်ဇင်သော်
ကျူရှင်မတက်ပဲ ၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မိုးညှင်းမြို့မှ မမျိုးခိုင်ဇင်သော် သြဂုတ်(၁၁) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့မှ အဖ ဦးမျိုးလွင် + အမိ ဒေါ်ဝင်းအေးခိုင် တို့၏ သမီး မမျိုးခိုင်ဇင်သော် (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်သည် ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အမှတ်ပေါင်း(၅၂၀)ဖြင့် […]
တစ်ရက် ကို သိန်း (၃၀) ဖိုးလောက် ရောင်းရတယ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ရေမုန့်ပါတဲ့ (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန် – ပြည်လမ်းတစ်လြှောက်ဟာ မြို့တွေ တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ဖြတ်ပြီးသွားရသလိုပဲ စားစရာတွေဟာလဲ မြို့တိုင်းမွာရွိနေလို့ ဟိုမြို့ ခနရပ် ဒီမြို့ ခနားနား ဆင်းဝယ်နဲ့ ကို တစ်လမ်းလုံးမအားရပါဘူး။ ခုလည်း အသိတစ်ယောက်က နတ်တလင်း မြို့ ရောက်ရင် ရေမုန့် စားကြည့် အရမ်းကိုကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ရေအာင်ရွာပြီးဝယ်စားတာပါ ရောင်းတဲ့ […]